Calhanoglu oo ciyaaraha looga ganaaxay meel kaga dhac qandaraas – Damqo
Calhanoglu oo ciyaaraha looga ganaaxay meel kaga dhac qandaraas
Hakan Calhanoglu oo u dheela kooxda Bayer Leverkusen ayaa ciyaaaraha laga mamnuucay afar bilood, isaga oo lagu helay in uu qandaaraas ku xad gudbay.
Kooxda Trabzonspor ee dalka Turkiga ka dhisan ayaa Fifa dacwad u gudbixsay sanadkii 2013kii taas oo ku saabsanayd in Calhanoglu uu heshiis kula galay in kaga soo biiro kooxda Karlsruhe sanadkii 2011kii, laakiin Jermalka ayuu sii joogay.
Hay’adda maamusha kubadda cagta Adduunka ee Fifa ayaa go’aamisay in Calhanoglu uu u gafay kooxdaTrabzonspor, balse racfaan uu ka qaatay maxkamadda caalamiga ah ee ciyaaraha ayaa go’aankaas waxba kama jiraan ka soo qaaday.
Calhanoglu, oo 22 jir ah ayaa hadda seegi doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkan waxaana waajib
ku ah in uu kooxda Trabzonspor siiyo 100,000 oo lacagta Yuuroo ah.
Rudi Voeller oo madax ka ah Leverkusen ayaa sheegay in kooxda aysan “ka daadagaynin” go’aankaas wuxuuna intaas ku daray in ay dhib wayn ku tahay iyaga iyo Hakan.
Voller 56 jir ah ayaa sheegay in Leverkusen ay la kulantay ciqaab aysan shuqul ku lahayn.
Marka kooxda Trabzonspor, ay rabtay in ay la soo wareegto Calhanoglu wuxuu jiray 17 sano wuxuuna ka tagay Karlsruhe balse wuxuu ku biiray Hamburg 2013kii, ka hor inta uusan Leverkusen u wareegin 2014kii.
Calhanoglu, oo todobo gool u dhaliyay Leverkusen xilli ciyaareedkan wuxuu seegi doonaa ciyaar ka tirsan Horyaalka Yurub oo ay la yeelan doonaan Atletico Madrid, waxaa sidoo kale laga mamnuucay in uu u safto qarankiisa Turkiga oo ciyaar Koobka adduunka loogu soo baxayo la leh Finland 24 bisha saddexaad.
Previous Neymar oo leh mustaqbal ka iftiin badan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo…(EEG TIRO KOOBKAN)
Next Ciyaartoy caan ah oo booqday wiil 5 jir ah oo qaba cudur aan la dawayn karin